I-Five Star Luxury kwi-Boutique House eneGadi kufuphi ne-Windsor, e-Ascot naseLondon
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguDebi
Le propati ye-1872 yeBanga lesi-II idweliswe kwiMews eyimbali iye yalungiswa ukuze ibe yindawo yokuhlala etofo-tofo eneempawu ezininzi. Ebonisa iimpahla eziphezulu kunye nobugcisa bexesha langoku, i-cottage inegadi yangasese kwaye ijonge intendelezo enomthombo.
“IBanga lesi-II lidwelise i-mews ezineefestile ezi-arched nezihonjiswe ngokumangalisayo ngefanitshala yale mihla.”
- Debi, umbuki zindwendwe wakho
Ibhedi elala umntu omnye, I-Queen bed, Izinto ezifakwa efestileni zokwenza indlu ibe mnyama, Umatrasi oyi-pillow-top
4.93 (iingxelo zokuhlola 82)
Indlu enomtsalane, ethe cwaka ikumgama wokuhamba weWindsor Great Park kunye neThames. IWindsor kunye neNqaba yayo iphakathi kweemayile ezintathu, iAscot Racecourse kunye neHeathrow ziphakathi kweemayile ezi-6. Isikhululo sikaloliwe saseLondon Waterloo sikumizuzu engama-35 ngololiwe.
Umgama ukusuka eHeathrow Airport
imizuzu eyi-11 ngemoto xa indlela ingaxakekanga
Umbuki zindwendwe ngu- Debi
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-R10598
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Englefield Green